ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့: ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါးခူကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 20 2020 | < 1
သည် Notre Dame ရဲ့ဘောလုံးကွင်းကြယ်ပွင့်ကောင် Te'o Twitter ပေါ်မှာသူ့ရည်းစားတွေ့သောအခါသူကပင်လာမည့်လာမယ့်အရာကိုဘယ်တော့မှမသင်္ကာမကင်း. သူ့ရည်းစားကသူ့ဘောလုံးအသင်းရာသီ၏အလယ်စဉ်သေဆုံး, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသူသည်ဤအားကြားပြောလေ၏. ကယ့်အတွက်, သူတစ်ဦးအသိအကျွမ်းခြင်းဖြင့် catfished ခဲ့, နှလုံးကြေကွဲလျက်ရှိခြင်းနှင့်ရှက် Te'o ထွက်ခွာ. "ငါးခူ" ဟူသည်အဘယ်အရာတစုံတရာကိုသူတို့အဘို့, လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအွန်လိုင်းထိုသူတို့သည်မိမိတို့သတိမရှိသောသားကောင်များမှထွက်သည်ငွေကြေးသို့မဟုတ်အခြားအရာများကိုအတင်းအဓမ္မရယူထားရန်ကြသည်မဟုတ်ဖြစ်စေတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းဟန်ဆောင်သည့်အခါက. တွင် 2011, FBI ကပတ်ဝန်းကျင်ခန့်မှန်းခြေ $50.4 သန်းကဒီအစီအစဉ်ကို၏ဆိုးရွားမီးမောင်းထိုးပြငါးခူ scam တွေအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့.
ငါးခူ scam တွေထဲကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာ
ငါးခူရိုးရှင်းစွာတက်ကိုက်ညီမှမထင်ကြဘူးကြောင်းအရာများအတွက်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သိရှိနိုင်ဖို့လွယ်၏. နတ်ဆိုး, ကြောင်တစ်ကောင် Fisher ရိုးရိုးမလိုက်ဖက်ပါပုံပြင်များပြောပြလိမ့်မယ်. သူတို့အမှန်တကယ်လူတစ်ဦးသိရှိလျှင်အတုပရိုဖိုင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် (သံသယရှိတဲ့ကြောင် Fisher အွန်လိုင်းစသင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်သည့်အခါ). သင်သိသောသူတယောက်မျှမရှိလူတစ်ဦးတွေ့ဆုံခဲ့သည်ပြီဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ပြောသောသူမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ကြောင်းင်. ဒါဟာအမြဲတမ်းကောင်းမွန်စိတ်ကူးင်သင်နှင့်တူသည်ဟုခံစားရပါကကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့မှတ်တမ်းကိုစစ်ဆေး back မှငါးဖမ်းကြကြောင်းဌာနကခံရပါတယ်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော့်ကိုမြင်ရ.
ငါးခူနှင့်ထိခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမို Learn ကနေဒီပညာရေးဆိုင်ရာဂရပ်ဖစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် instantcheckmate.com.
ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါးခူ Infographic ရှောင်ကြဉ်ခြင်း